Somali News 12.01.21
Published December 2, 2021 at 5:07 PM CST
Qof lugeynayay ayaa dhintay ka dib markii uu ku dhacay baabuur SUV subaxnimadii Arbacada dhinaca galbeed ee magaalada Sioux.
Ninka ayaa goynayay wadada galbeedka 4th iyo Bluff markii uu istaagay si uu wax u soo qaato. Dabadeed waxa ku dhuftay gaadhi yar oo SUV ah oo bari u socday Galbeedka 4-aad.
Darawalka ayaa ahaa wiil dhalinyaro ah oo sheegtay in aysan ninkan arki karin cadceed darteed.
Saraakiisha caafimaadka ee gobolka Iowa ayaa ka warbixinaya cosbitaalada la dhigay COVID-19 ee gobolka oo dhan iyo caabuqyadu way sii kordhayaan.
In ka badan 9 kun oo caabuqyo COVID-19 cusub ah ayaa la xaqiijiyay usbuucii la soo dhaafay.
Boqolkiiba siddeed iyo toban waxay ahaayeen carruurta 17 iyo ka yar.
Gobolka 14-maalmood ee tijaabada heerka togan ayaa lagu soo waramayaa inuu yahay 11.2 boqolkiiba Arbacadii. Tani waxay muujinaysaa korodhka toddobaadka shanaad oo toos ah.
721 reer Iowan ah ayaa cusbitaalka la dhigay COVID-19 -- oo kordhay ku dhawaad 100 isbitaal oo la dhigay todobaadkii hore.
Toddobaadkii la soo dhaafay, 91 kale oo Iowan ah ayaa la xaqiijiyay inay u dhinteen COVID-19. Tani waxay tirada guud ee dhimashada gobolka ka dhigaysa 7,445.
Badhasaabka Kim Reynolds ayaa sheegay in Maxkamadda Sare ee Maraykanku ay fursad u leedahay in ay "saxdo khalad taariikhi ah" iyada oo tixgelinaysa kiis horseedi kara in la baabi'iyo xukunkii maxkamadda ee 1973 ee sharciyeeyay ilmo soo rididda.
Kiiska la horkeenay maxkamada sare ee Mareykanka Arbacadii ayaa ku saabsanaa sharciga Mississippi ee mamnuucaya ilmo iska soo xaaqidda ka dib toddobaadka 15-aad ee uurka.
Reynolds waxa uu ka mid yahay daraasiin guddoomiyayaal Jamhuuriya ah oo saxeexay qoraal kooban oo sharci ah oo loo gudbiyay maxkamadda taas oo ku doodaysa Roe v Wade iyo go'aan kale oo 1993 ah oo ku saabsan xuquuqda ilmo iska soo rididda waa in la buriyo.
(Gudoomiyaha ayaa sheegay in go'aanadii hore ee maxkamada sare ee Maraykanka ee taageeray xuquuqda ilmo iska soo ridida aan la ixtiraamin madax banaanida gobolka.
Sannadkii 2018, Reynolds waxa uu saxeexay sharci ka mamnuucaya ilmo iska soo rididda Iowa ka dib markii garaaca wadnaha uurjiifka ah la ogaan karo, qiyaastii lix toddobaad oo uur ah. Maxkamadda sare ee Iowa ayaa meesha ka saartay sharciga, iyadoo sheegtay in dastuurka Iowa uu haweenka u dammaanad qaadayo xuquuqda aasaasiga ah ee ilmo soo rididda.)
Diiwangelinta Des Moines ee dhawaanta "Iowa Poll" ayaa lagu ogaaday 57% kuwa la waraystay waxay yiraahdeen ilmo iska soo rididku waa inuu sharci yahay inta badan ama dhammaan kiisaska iyo 38% waxay yiraahdeen waa sharci darro inta badan ama dhammaan kiisaska.